Barnaamij Ururin Dhaqaale oo Loogu Tala Galay ee Dugsiga Sare Sheikh
SOMALITALK - DUGSIGA SARE EE SHEIKH
Aqoonyahanka Reer Minnesota oo Taageeray Dugsiga Sare ee Sheikh, una ballan qaaday 7 Arday in ay ka bixinayaan kharasha Iskoolka hal sano ah...
SomaliTalk.com | Minneapolis | April 25, 2009
Furitaankii kulanka iyo soo dhaweyn kaddib waxaa madasha lagu soo dhaweeyey Sh. C/raxmaan Shariif oo ugu horayn dhiiri kagaliyey dadweynihii madasha isugu yimid isagoo xasuusiyey xigmadda ah: Qofku waxa uu najaxaa "haddii uu arrin joogteeyo, islamarkaana uu niyad wanaagsan iyo dadaal ka daro."
Kaddib waxa uu ku xeel dheeraaday sida diinta Islaamku u qiimayso cilmiga, isagoo xusay in Kitaalbka Quraanka ay ku jiraan ilaa 700 kelmadood oo ka ku saabsan cilmiga. Taas waxay ku tusaysanaa, ayuu yiri, sida Islaamku u qiimaynayo cilmga- Sidoo kale Aayadihii ugu horeeyey ee Allah ku soo dejiyey Nebi Muxammad (NNKH) waxay ahayd "Iqra" oo kuu muujinaysa muhiimadda wax akhriska si loo yeesho cilmi. Sidoo kale waxaa Allah ku dhaartay Qalinka iyo waxa uu qorayo.
Sh. C/raxmaan waxa uu ku dheeraaday in Islaamku qiimo aad u weyn siinayo aqoonta iyo raadinteeda iyo barashadeeda. Aqoontu waxay fure u tahay horumarka bini'aadamka.
Aqoon la'aani waa iftiin la'aan, ee hala gacan qabto ardayda waxbaranaysa.
Prof. Awo Cabdi waxa soo bandhigtay tiro koob ku saabsan ardaya Soomaaliyeed ee dugsiyada hoose dhigya oo ay samaysay hay'adda UNICEF. Tirakoobkaasi waxa uu sheegay in ay 2003-2004 jireen 1172 Dugsi oo shaqaynayay. Marka la eego ardayda da'doodu gaartey waxbarashada dugsiyada hoose ee dhiganayey iskuul xilligaas waxaa lagu qiyaasay 20% boqolkiiba (taas macnaheedu waa in boqolkiiba 80% ardayda gaaray da'da waxbarasho dugsi hoose in aysan iskuulba dhigan). Tirada iskuulka dhiganayeywaxay isugu jireen boqolkiiba 13 % oo ahaa wiilal iyo boqolkiiba 7% oo ahaa gabadho.
Macallin Maxamed Xasan oo isaguna madasha hadal kooban ka soo jeediyey ayaa sheegay in cilmigu uusan xuduud lahayn, taas oo uu ku tusaalaynayey in dugsiga la caawiyo meeshuu doono ha kaga yaal dhulka Soomaalidu degto in ay tahay guul iyo faa'iido.
Xog la'aani waa wax qabad la'aan, Aqoon la'aana waa iftiin la'aan.
Haddba, qofkasta oo ka qayb qaadanaya caawinaada ardayd adugsiga sare ee Sheikh, waxay laxiriiri karaan Eng. Khaliif Axmed oo ku sugan Minneapolis, Email: Gashanle@aol.com